Kate Winslet Enwee Mmeri BAFTA maka Ihe Nkiri ohuru Banyere Steve Jobs | Esi m mac
Izu abụọ ga-aga tupu nnyefe nke Hollywood Oscars, ihe nkiri ahụ bụ Steve Jobs alaghachila ịnakọta onyinye ọzọ n'ime mmadụ atọ a họpụtara ya. Oge nke a Kate Winslet emeriela ọzọ na ngalaba dịka onye na-akwado nwanyị kachasị mma BAFTA si na English Film Academy na ọrụ PR ya ka ọ bụ Apple Johanna Hoffman, na British Industry Awards nke enyere n’abalị ụnyaahụ.
A họpụtara ihe nkiri Steve Jobs na ụdị nke kacha mma na-egosi na Aaron Sorkin na otu onye na-eme ihe nkiri kachasị mma maka Michael Fassbender, bụ onye furu Leonardo DiCaprio ọzọ maka ihe nkiri El renacido (Revenant) nke ndị Mexico Iñárritu duziri, ebe Aaron Sorkin meriri ndị edemede edemede nke Nnukwu mkpụmkpụ.
Kate Winslet toro onye isi ihe nkiri Danny Boyle, Michael Fassbender na Johanna Hoffman ọrụ ọ rụrụ na fim ahụ:
O riri m ọnụ nke ukwuu. Danny Boyle magburu onwe ya iso gị rụọ ọrụ. Daalụ maka ịkwado m maka ọrụ mgbe anyị na-amachaghị onwe anyị. Michael Fassbender ị duziri anyị niile na ọrụ a. Amaghị m otu ị si mee ya mana ọ bụ onye ọmarịcha omee. Achọrọ m ịkọwa onye na-ahọrọ ka a ghara ịkpọ aha ya, Johanna Hoffman, onye bụ ezigbo onye na-eso ụzọ na ezigbo enyi Steve Jobs.
Winslet mesiri ya ike Hoffman nyeere aka kwadebe ọrụ ahụ site n'ịgwa ya akụkọ ndị mara mma n'oge ya na Steve Jobs na-arụ ọrụ.. Nke a abụghị onyinye mbụ Winslet meriri na ihe nkiri a. Izu ole na ole gara aga, ọ meriri Golden Globe n'otu ụdị ahụ, a họpụtakwara ya dị ka onye na-akwado ihe nkiri maka Oscar Hollywood na-enyefe n'ime izu abụọ, na February 28.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Kate Winslet meriri BAFTA maka ihe nkiri ọhụụ banyere Steve Jobs
Etu ị ga - esi kwalite oge Apple Watch na - enweghị ọrụ ọ bụla